Booqashadii Cabbaas ee dalka Iswiidhen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Madax-waynaha dawladda Falastiin Maxmuud Cabbaas iyo madaxa dawladda Iswiidhen Stefan Löfven oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madax-tooyada. Sawirle: Jonas Ekströmer/TT.
Booqashadii Cabbaas ee dalka Iswiidhen
Booqashadii Maxmuud Cabbaas
La daabacay torsdag 12 februari 2015 kl 10.57
Toddobaadkan ayuu markii ugu horreeysay booqashi rasmi ah dalka Iswiidhen ku yimid madax-weynaha qowmiyadda Falastiin Maxamuud Cabbaas, wixii ka dambeeyay aqoonsigii uu bishii oktoobar ee sannadkii ina dhaafay dalkani ku siiyay qaranka Falastiin. Shir Jaraa'id oo ey si waa-jir ah u qabteen Stefan Löfven, madaxa dawladda Iswiidhen iyo Maxmuud Cabbaas ayuu Löfven ku sheegay:
- ii ogolaada marka hore inaan shirkan jaraa'id ku soo dhoweeyo madax-weynaha Falastiin. Madax-weynow ku soo dhowow caasimadda dalkan Iswiidhen ee Istockholm. Ereyadaasi waxey ka mid ahaayeen ereyo uu madaxa dawladda Iswiidhen ka sheegay shir-jaraa'id oo ey salaasadii ina dhaaftay xarunta dawladda ku qabteen madaxa dawladda Iswiidhen Stefan Löfven iyo madax-weynaha Falastiin Maxmuud Cabbaas oo booqasho rasmi ah markii ugu horreeysay ku yimid dalkan Iswiidhen, wixii ka dambeeyay aqoonsigii uu dalkani ictiraafay jiritaanka dawladda Falastiin.
Madax-weynaha Falastiin, Maxmuud Cabbaas oo shirkaa jaraa'id ka hadlayey ayaa sheegay inuu aad ugu farax-san yahay in uu madaxa dawladda Iswiidhen ku soo dhoweeyo dalkan iyo casumaadda uu ka heley, mar uu middaa ka warramayeyna waxaa ereyadiisa ka mid ahaa:
Maahan markii ugu horreeysay ee uu Maxmuud Cabaas booqasho ku yimaado dalkan Iswiidhen, hase yeeshee waa markii ugu horreeysay wixii ka dambeeyay ictiraafka maamulka dawladda Falastiin ee uu Cabbaas madaxda ka yahay.
Gabagabadii bishii oktoobar ee sannadkii tagay ayey ahayd kolkii uu mamulka dalkan Iswiidhen ku dhawaaqay inuu aqoonsi siiyay maamulka Falastiin, middaasina oo dood aad u ballaaran ka dhalisay dalka gudihiisa iyo dibaddaba. Xilligaasi ayey ahayd kolkii dawladda Israa'iil ay dib ugu yeeratay safiirkii dalkan u matalayey, middaasina oo lagu muujinayey sida dawladda Israa'iil uga careey-san tahay aqoonsiga uu dalka Iswiidhen, ahaana dalkii ugu horreeyay ee xubin ka ah ururka Miodwga Yurub ee EU inuu ictiraaf siiyo qaranka Falastiin.
Madaxa dawladda Iswiidhen Stefan Löfven oo ka hadlayay shirkii jaraa'id oo ey wada-jirka u qabteen madax-weynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa sheegay in aqoonsigan aan cidna wax loogu dhimeeyn, isla-markaana ay dawladdiisu halkeedii ka sii wadi doonto xiriirkii wanaag-sanaa oo ay la lahyd dawladda Israa'iil, isla-markaana uu bog cusub u bilowdey xiriirka labada maamul ee Iswiidhen iyo Falastiin. Iminkana looga fadhiyo maamulka falastiin inuu doorasho xor ah ka qabto carrigaa iyo ilaalinta xuquuqda haweenk:
- Waxaannu ka wada-hadalney xiriirka labada maamul ka dhexeeya. Tallaabada xigta ee wada-hadalka nabadda. Hab-socodka dhismaha dawladda Falastiin. Kaalinta uu dalkan Iswiidhen ka geey-san karo iyo sidoo kale waxyaabaha uu dalkani ka filayo maamuulka qaranka Falastiin iney ku tallaabsadaan:
- Sidoo kale waxaan madax-wayne Cabaas aan ku war-geliyay inaan ka fileeyno, ilaalinta ammaanka dalka Israa'iil iyo dib u heshiisiinta garabyada isku maan-dhaaf-san dalka Falastiin, sida uu sheegay Stefan Löfven.
Dalka Iswiidhen ayaa ah waddankii ugu horreeyay ee waddammada xubnaha ka ah ururka Midowga Yurub ee ictiraafa qaran-nimada Falastiin. Iyadoona wixii intaa ka dambeeyay ey waddammo ey ka mid yihiin Ingiriiska, Faransiiska, Isbaanishka ey baarlammaannadoodu talo-aqlabiyad ah ku soo jeediyeen in maamullada waddammadaasi lagu dhiiri-geliyo ictiraafka qaranka Falastiin.